होमस्टे सन्चालनमा जुटेका भुजुङ्गेका स्थानीयहरु लमजुङ र तनहुँ भ्रमणमा जाँदै ! – ebaglung.com
होमस्टे सन्चालनमा जुटेका भुजुङ्गेका स्थानीयहरु लमजुङ र तनहुँ भ्रमणमा जाँदै !
२०७५ चैत्र ५, मंगलवार १७:१५	Top News, अन्य समाचार, थप समाचार
गल्कोट २०७५ चैत ५ । होमस्टे (घरबास)संचालनमा जुटेका गल्कोटका स्थानीयहरु भोलि चैत ६ गते अवलोकन भ्रमणमा जाने भएका छन्।
गल्कोट नगरपालिका वडा नम्बर ६ भुजुङ्गेका स्थानीयहरु होमस्टे अवलोकनका लागि लमजुङ र तनहुमा जान लागेका हुन् । गल्कोट स्टोन भिलेज होमस्टे संचालनमा जुटेका उनिहरु एशियाकै नमुना मानिने लमजुङको घले गाउँ र तनहुँको राना गाउँ होममा संचालित होम स्टेमा अवलोकनको लागि जान लागेको अध्यक्ष कमला श्रीसले ईबागलुङलाई बताईन् । ‘नमुना होमस्टे कार्यक्रम चलाउने उदेश्यका साथ लागेका छौ , त्यसैले त्यहाँ पुगेर नयाँ कुरा सिकौँ भनेर लान लागेका हौ ।’ श्रीसले भनिन ।
होमस्टे कार्यक्रमका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले समेत साथ दिए पछि नमुना होम स्टे बनाउने उनिहरुको लक्ष्य छ । प्रदेश सरकारले दश लाख सहयोग गरेको छ । पहिलो चरणमा ५ घरमा होमस्टे कार्यक्रम गर्ने अध्यक्ष श्रीसले जानकारी दिईन ।
प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपुर्ण भुजुङ्गेमा पर्यटकलाई आकर्षित गर्न होमस्टे कार्यक्रम संचालन गर्न लागिएको हो । स्थानीय स्लेट ढुङ्गाबाट बनेका घरबाटोले सुन्दर गाउँमा होमस्टे कार्यक्रम संचालन सुरु भएपछि स्थानीयको आय आर्जनमा पनि वृद्धि हुने र पर्यटकलाई समेत आकर्षण गर्न सकिने स्थानीयले बताए ।
उनिहरु भोलि चैत ६ र ७ गते अवलोकन भ्रमणमा जान लागेका हुन् । त्यहाँबाट फर्केपछि आफुरुले पनि सुरु गर्ने गल्कोट स्टोन भिलेज होमस्टेले जनाएको छ । भ्रमणमा १६ जना स्थानीय सहभागी हुने छन ।
गल्कोटको मल्म, रिघा र सिसाखानी जोड्ने सडक निर्माणकार्यको शुभारम्भ !
अर्गलमा रहेका १००० दिनका आमा तथा गर्भवती महिलाहरुलाई अण्डा वितरण !